Ambongadiny Express Manufacturer sy Supplier | Ara-potoana
Ny Express international dia ampahany lehibe amin'ny varotra iraisam-pirenena. Fa ny ankamaroan'ny eBay / AliExpress / Shopiy mpivarotra hitaterana ny vokatra any amin'ny firenena. Ny serivisy lehibe ...
Mazava iraisam-pirenena dia iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra ara-barotra iraisam-pirenena. Fa ny ankamaroan'ny eBay / AliExpress / Shopiy mpivarotra hitaterana ny vokatra any amin'ny firenena. Ny lehibe isan-karazany tolotra naroson'ny Guangzhou Ontime manome anao be dia be ny safidy ho samy hafa ny fandefasana ny fanananareo fitaterana. Ankoatra ny rivotra sy ny ranomasina entana, express fanompoana fitaterana no noforonina ny hamaly ny fanantenanao sy ny zavatra ilaina raha vao araka izay azo atao. Manolotra fe-potoana haingana sy mahomby eo anelanelan'ny Sina sy ny firenena voafidy ny serivisy mazava. Ary ny iraka, fantatra koa amin'ny hoe «mazava lahateny», dia maneho ny «isan-trano» fanompoana izay ny fanaterana orinasa hesoriny ny entany amin'ny nanaiky pick-up adiresy (matetika ny mpamatsy na ny consolidator ao amin'ny firenena niaviany), ary hamonjy ny fandefasana anao ao amin'ny adiresy fandefasana (ao amin'ny fonenanao na ny adiresy client ohatra).
Ao anatin'ireny fanaterana ireny, ny ekipa tompon'andraikitra dia mitantana ny dingana rehetra ilaina amin'ny fandefasana entana manomboka amin'ny teboka A ka hatramin'ny teboka B, izany hoe: ny fanesorana, ny fitaterana / ny entana, ny fadin-tseranana amin'ny fiaviany sy ny fiafarany, ny fandoavana ny sarany ary fomba amam-panao, fa koa adidy iray manontolo fombafomba ara-panjakana ilaina. Noho ny fifandraisana mafy sy ny fiaraha-miasa hatrany amin'ny orinasa lahateny manan-danja indrindra (DHL, FedEx, UPS sy TNT),Guangzhou Ontime miantoka haingana sy azo antoka "isan-trano" fanafihana eo amin'i Shina sy ny firenena voafidy. Rehefa mandefa miaraka amin'ny GZ Ontime ianao - mandefa manam-pahaizana manokana amin'ny serivisy fandefasana iraka iraisam-pirenena ianao! Miaraka amin'ny serivisy fonosana sy fonosana malalaka misy anay, miaraka amin'ny vahaolana fandefasana sy fanarahana izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao - ianaro ny fomba hanafaran'ny GZ Ontime!
1. Niorina tamin'ny 1969 ny DHL, ankehitriny DHL no orinasa lozisialy lehibe manerantany. DHL dia ekipa iraisampirenena manana matihanina amin'ny fandefasana entana maherin'ny 380.000, natambatry ny filan'ny lojisialy. Ary DHL miasa ao amin'ny tontolo tsy manam-paharoa. Ny DHL dia manavao toy ny fanombohana, miaraka amin'ny herin'ny fikambanana iraisam-pirenena. DHL dia hanome ny tsara indrindra fanompoana fandefasana, ary izy ireo koa dia manana ny fomba amam-panao mahery vaika indrindra fahazoan-dalana fahaizana. Ho haingana indrindra, vola ihany no 3 ~ 5 andro ny asa.
2. Ny FedEx / TNT FedEx Express dia mandrakotra ny adiresy sy ny serivisy an-dalambe rehetra any Etazonia mihoatra ny firenena 220 sy faritany. Ny tambajotra maneran-manome fotoana saro-pady, rivotra-tany mazava fanompoana amin'ny alalan'ny seranam-piaramanidina mihoatra ny 650 maneran-tany.
3. UPS Voalohany mpanjifa. Nahasarika ny olona. Entina fanavaozana. Ny tantaran'i UPS, izao tontolo izao lehibe indrindra fanaterana fonosana orinasa, nanomboka zato taona mahery lasa izay miaraka amin'ny $ 100 findramam-bola mba jumpstart kely fanompoana mpitondra hafatra. Ahoana no nivoatra ho multi-arivo tapitrisa dolara orinasa maneran-dia maneho ny tantaran'ny fitaterana maoderina, ny varotra iraisam-pirenena, fitaovana sy ara-bola ny asa. Ankehitriny, UPS no mpanjifa voalohany, ny olona nitarika, fanavaozana entin'ny. Izany dia midika hoe Powered by mihoatra ny 495.000 mpiasa mampitohy mihoatra ny 220 sy ny faritany manerana ny firenena ny lalana, lalamby, rivotra, sy ny ranomasina. Rahampitso, UPS dia hanohy hitarika ny orinasa ary hampifandray izao tontolo izao, miaraka amin'ny fanoloran-tena ny kalitaon'ny tolotra sy ny fampandrosoana maharitra ny tontolo iainana.
4. Aramex Aramex dia nitombo haingana ho marika manerantany, ekena amin'ny serivisy namboarina sy vokatra vaovao. Voatanisa ao amin'ny Dubai Financial Market (DFM) sy monina ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, Aramex dia afovoan'ny amin'ny sampanan-dalana eo anelanelan'ny Atsinanana sy Andrefana, izay manome fahafahana antsika mba hanome namboarina fitaovana vahaolana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao fomba mahomby sy hahatratra bebe kokoa raharaham-barotra sy mpanjifa faritra sy maneran-. Izahay dia manolo-tena hanatsara hatrany ny asanay manerana ny faritra ary manararaotra ny fitomboan'ny orinasa amin'ny tsena mipoitra any ivelany. Io no fomba fototra ho an'ny fampandrosoana maharitra ny raharaham-barotra sy ny fanoloran-fanamorana midadasika kokoa, eran-varotra amin'ny izao tontolo izao tsy mitsaha-miova.
5. Tsipika natokana. Ambonin'ny zava-drehetra, izahay koa dia nanome ny vidin'ny fanompoana isan-trano. By Hong Kong miara-miasa amin'ny marin-toerana sy ny loharanom-baovao izao tontolo izao airfreight mitondra fitaovana tsimandoa amin'ny firenena Eoropeana sy ny US, GZ Ontime Direct-dalana, dia miaraka mazava sy ny asa fanompoana ao amin'ny paositra DDP (Ambaraonareo Adidy Paid) fomba. Mampiditra sidina mivantana avy any Hongkong mankany amin'ny vavahady itodiana isan'andro izahay ary mahazo ny fahazoan-dàlana amin'izany andro izany ihany. Io dia fanaraha-maso feno 100% amin'ny entana entin'ny rivotra ary misy ny fandefasana kilometatra farany izay vahaolana ara-toekarena miaraka amin'ny fandefasana haingana izay natao indrindra ho an'ny fonosana e-varotra. Nefa tsy manenika an'izao tontolo izao. Ny teny nindramina tokony ho afa-5 ~ 7USD / KG. Amin'ity fotoana ity dia manana an'ity serivisy manokana ity ho an'ny Malezia, Etazonia, Eropa. Fa raha mila tsipiriany bebe kokoa momba izany, dia mifandraisa amiko, mba afaka manome ny asa fanompoana tsara indrindra ho anao.
Teo aloha: Tsara User mavesatra noho ny nanatitra Fast Shanghai USA UK Thailand DHL Door vola lany Rates Cheap Avy Cost China Air entana Cargo Shipping Agent ho any Eoropa
Manaraka: 2019 vidiny ambongadiny Express (DHL UPS FedEx TNT) fandefasana entana avy any Shina mankany Isiraely
DHL FedEX UPS serivisy fanambaràna sambo iraisam-pirenena ...